Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Oo Ka Hadlay Mawqifka Xisbigiisa Ee Furista...
Guddoomiyaha xisbiga Waddani oo ka hadlay mawqifka xisbigiisa ee furista…
Khamiis , Luulyo, 8, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddoomiyaha xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxammed Cabdilaahi (Cirro), ayaa sheegay in xisbigiisu diyaar uyahay furista ururada siyaasada.Cirro ayaa sheegay in Waddani diyaar u yahay furista ururada siyaasada iyo doorashooyinka kale ee soo fool leh.
“Dalkeenna waxaa ku soo socda 3 doorasho, doorashadii golaha guurtida, doorashadii madaxtooyada, doorashada iyo ta ururada siyaasadda”.
Xisbiga Waddani saddexda doorashaba diyaar buu u yahay, ee ninkii wax isla hayow bannaanka u soo bax” ayuu yidhi Cirro.
Cirro ayaa doorashada ururada siyaasada ka danbaysiiyay doorashada madaxtooyada marka la eego sida uu hadalkiisa u dhigay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliland Baashe Maxammed Faarax, ayaa isagu hore u sheegay in ururada la furi doono 6 bilood kahor doorashada madaxtooyada.
Xog: Guddigii uu Rooble u magacaabay baaritaanka askarta Eritrea ku ma…
Xog: DF oo Muqdisho ku xayirtay diyaarad ku socotay Garbahaareey + Sab…
Wararka Maanta : Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya oo Maanta si weyn looga...
Wararka Maanta : Madaxtooyada Puntland oo jawaab ka bixisay eedaynta wasiir Jamaal u...
Wararka Maanta : Guddiga doorashada heer federal oo soo saaray jadwal cusub oo doorasho...
Wararka Maanta : Sucuudiga oo Fahmay Khiyaanadii imaaraadka & Dagaalka Dhaqaalaha |...